(SAWIRRO) Bankiga Amal oo qalab caafimaad ugu deeqay isbitaalka guud ee Garowe. | puntlandi.com
Friday, March 17th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRRO) Bankiga Amal oo qalab caafimaad ugu deeqay isbitaalka guud ee Garowe.
Bankiga Amal ayaa isbitaalka guud ee Garowe ugu deeqay qalab caafimaad oo uu isbitaaalku baahi weyn u qabay. Qalabkaan lagu wareejiyay isbitaalka Garowe ayaa ka koobnaa shan nuuc oo afar kamid ah ay ahaayeen Oxygen iyo hal mashiin oo ah nuuca ilmaha loogasoo saaro xabka.
Munaasabad qalabkaan lagu wareejinayay oo ka dhacday gudaha isbitaalka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka Bangiga Amal, xildhibaan Saciid Cabdi Samatar (Surcad), guddoomiye ku xigeenka degmada Garowe Cismaan Maxamed Towxiid, agaasimaha isbitaalka Garowe Dr. Cabdisamad axmed Jaamac iyo gabdhihii u qareemay in isbitaalka Garowe loo helo qalabkaan.
Maamulaha guud ee Bangiga Amal Dr. Siciid Cali Shire ayaa sheegay qalabkaan inay kaga jawaabeen markii lasoo sheegay daruufaha iyo qalab la’aanta ka jirta isbitaalka Garowe, wuxuuna cadeeyay inay waajib ku tahay inay ka qeyb qaataan haqabtirka baahiyaha caafimaad ee bulshadooda haysta.
Maamulaha Amal Bank ee gobolka Nugaal Cali Cabdulqaadir Ciise ayaa isna ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay inay shirkada Amal ka go’an tahay inay kaalin lixaad leh ka qaadato kor uqaadida caafimaadka bulshada, si loo helo bulsho caafimaad qabta.
Agaasimaha isbitaalka Garowe. Dr. Cabdisamad Axmed Jaamac ayaa Amal Bank uga mahad celiyay qalabkaan ay ku deeqeen. Wuxuu agaasimuhu qiray inuu qalabkaan isbitaalku baahi weyn u qabay, wuxuuna balanqaaday inay masuuliyad weyn iska saaridoonaan ilaalintiisa in looga faa’ideeyo bulshada.
Guddoomiye ku xigeenka degmada Garowe Cismaan Maxamed Towxiid, ayaa ku ammaanay shirkada Amal sida ay uga qeyb qaadanayso taakulaynta bulshadeeda, isagoo xusay inay horey gacan uga geysteen gurmadka abaaraha Puntland.
Xildhibaan Surcad ayaa dambayn uga mahad celiyay shirkada Amal Bank sida ay iskugu howshay inay isbitaalka Garowe usoo iibiso qalabkaan muhiimka ah oo la’aantiis dad badan ay u dhinteen, Waxaa kale oo uu u mahad celiyay gabdhaha isku xilqaamay inay u qareemaan inuu isbitaalku qalabkaan helo, taasoo ugu dambayn lagu guulaystay.